Mootummaan Naannoo Oromiyaa mootummoolii naannoo Itoophiyaa keessaa isa tokko dha. Mootummaan naannichaa qaama seera baaftuu, seera raawwachiiftuu fi seera hiiktuu qaba. Manni Maree Uummataa Naannoo Oromiyaa (Caffee) qaama seera baaftuu olaanaa Mootummaa Naannichaa dha. Manni maree kunis bu’uura Heera Itoophiyaa keewwata 52 fi 55tiin dhimmoota aangoo naannichaa keessa jiran irratti labsiiwwan ni tuma. Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaas labsiiwwan tumaman raawwachiisuuf dambiiwwan ni tuma. Akkasumas Biiroowwan Sektaraa, Komooshinoonnii fi Ejensiiwwan Mootummaa Naannichaa seerota bahan raawwachiisuuf qajeelfamoota raawwii ni baasu.
Heerri Itoophiyaa keewwata 5(3) jalatti Mootummoonni Naannolee afaan hojii naannoo isaanii ilaalchisuun seera tumachuu ni danda’a jedha. Haaluma kanaan Afaan Oromoo afaan hojii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’uun isaa Heera Oromiyaa keewwata 5 jalatti tumamee jira. Kanaaf, Oromiyaa keessatti falmiiwwan Mana Murtii Afaan Oromoon geggeeffama. Dabalataanis, dambiiwwanii fi qajeelfamoonni raawwii Afaan Oromoon kan maxxanfamaa jiran yoo ta’u labsiiwwan Afaan Oromoo, Amaariffaa fi Ingiliffaan maxxanfamaa jiru. Seeronni naannichaas kan maxxanfaman Magalata Oromiyaa Irratti dha.
Labsiiwwan, dambiiwwan fi qajeelfamoonni raawwii naannoo Oromiyaan tumamaman seerota Itoophiyaa iddoo hundatti raawwii qaban waliin ta’uun sirna seeraa naannoo Oromiyaa keessatti raawwii qabaatan ta’u.
Seerota Naannoo Oromiyaa arguufis ta’e buufachuuf liinkii armaan gadii hordofaa:
Read more about Seerota Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Labsiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Qajeelfamoota Raawwii Oromiyaa